Ndepụta saịtị iji budata ebook n'efu n'usoro iwu | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Ndepụta saịtị iji budata ebook n'efu
2 Nsonaazụ na-enweghị uru iji budata ebook
2.1 Nnukwu ọrụ
2.2 Ihe oru onwe
2.3 Saịtị ndị ọzọ ibudata eBooks
3 Ọrụ azụmahịa nwere akwụkwọ ntanetị n'efu
4 Saịtị ibudata akwụkwọ ntanetị
A mkpokọta anyị bu n'obi na-enye ihe emelitere ndepụta nke saịtị iji budata ebook n'efu na iwu. Ebumnuche anyị bụ imelite ndepụta oge site na ịgbakwunye saịtị ọhụrụ ma ọ bụ wepụ ndị na-adịghịzi arụ ọrụ. Cheta na ha ga-abụ ọrụ na-enye ọdịnaya n'ụzọ iwu.
Anyị na-anwa ịkesa saịtị ndị ahụ ka ojiji ha wee nwee ntụsara ahụ dị ka o kwere mee. Na parentheses anyị na-egosi asụsụ nke akwụkwọ ọgụgụ ndị ị nwere ike ịchọta n'elu ikpo okwu ọ bụla. (Njedebe) Spanish - (EN) Bekee na (B IN IN) Na Spanish na Bekee. The ozi ọma kemgbe ikpeazụ update-egosi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndabere.
Ndepụta anyị nwere 63 isi mmalite nwere ọtụtụ nde akwụkwọ dị n'asụsụ niile.
Nsonaazụ na-enweghị uru iji budata ebook
N'akụkụ a, anyị ga-egosi saịtị na-enweghị uru ebe budata akwụkwọ nke ụdị dị iche iche site na akwụkwọ ochie, edemede, site na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ ụmụaka.
Nnukwu oru ngo na oru ndi ozo di na ndi mmadu. Gutenberg pụtara ìhè karịa ihe niile, maka ịbụ nke kachasị oke na n'ihi na ọ na-enye anyị akwụkwọ ntanetị na .epub na .mobi.
Gutenberg Project (B IN IN) Kpochapụwo n'etiti ndị ochie mgbe a bịara n'ọrụ ndị na-enye ọrụ enweghị ụgwọ eze. Akwụkwọ nnukwu akwụkwọ ọha na eze kachasị n'ụwa.
Archive.org (B IN IN) Ebe nchekwa nke ọtụtụ nde akwụkwọ ederede ọha na eze. Na-enye pdf.
- Ebe a na-emeghe (B IN IN) Nchịkọta Ntanetị Internetntanetị nke na-achọ ịmepụta ibe weebụ maka akwụkwọ ọ bụla dị. Ọ bụ ezie na ọ naghị ekwe ka nbudata sitere na taabụ ma ọ bụ peeji nke akwụkwọ ndị ahụ, ọ na-ejikọta na Gutenberg, Archive ma ọ bụ isi mmalite ebe ọ dị ma ọ bụrụ na ọ dị na ngalaba ọha.
Wikisource in Spanish ma ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ n'asụsụ ọzọ wikisource. Ọ bụ ọba akwụkwọ dị n'ịntanet nke ihe odide mbụ na ngalaba ọha ma ọ bụ n'okpuru ikikere GFDL bụ ọrụ Wikimedia nke na-enye ohere ibudata na pdf.
Wikibooks (Njedebe) Ihe oru Wikimidia ozo n’emume ime ka akwukwo, akwukwo ndi ozo, nkuzi ma obu akwukwo mmuta ndi ozo nwere ihe omuma n’enweghi ohere nye onye obula.
iBiblio (EN) Nnukwu ọba akwụkwọ na akwụkwọ dijitalụ.
Ọbá akwụkwọ dijitalụ Hispaniki (Njedebe) Free na free Portal nke digitized akwụkwọ nke mba n'ọbá akwụkwọ.
Miguel de Cervantes Virtual Ọba akwụkwọ (Njedebe) Ọ bụ usoro nchịkọta nke ọrụ kpochapụwo n'asụsụ Hispanic.
Ọchịchị netwọọdụ nke ọba akwụkwọ nke Seville (Njedebe) Ndekọ dijitalụ nke netwọọdụ ọbá akwụkwọ ọchịchị obodo nke Seville.
Europeana (B IN IN) Ọ bụ ohere ịnweta ọtụtụ puku ihe dijitalụ na Europe.
Mahadum Adelaide (EN) Ọbá akwụkwọ dị n'ịntanetị nke Mahadum Adelaide dị n'Australia, na-enye anyị ohere ịgụ na ntanetị, ma ọ bụ ibudata ọrụ dị iche iche.
Ihe oru onwe
Obere oru na-abaghi ​​uru.
Ọgazị na Ọktoọs (Njedebe) Otu n'ime atumatu na-abaghị uru nwere nke kachasi elu na mbipụta ya. Ganso y Pulpo bụ ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na-abụghị nke na-enweghị uru na-achọ ịmegharị ederede nke siri ike ịnweta ma ọ bụ echefuru echefu na enweghịrị ikike.
Gha maka Algernon (Njedebe) Ebumnuche magburu onwe ya nke na-ebipụta echiche efu, akụkọ sayensị na akụkọ ụjọ na Spanish. Ọrụ onwe onye ọzọ na-abụghị nke na-ewetara anyị akụkọ sitere n'aka ndị edemede kachasị elu nke anaghị ebipụta n'asụsụ Spanish. Mmeri nke ihe Ignotus 2013, ma ọ bụrụ na ị na-amasị sayensị akụkọ ifo na ọ bụ kwesịrị.
Mbipụta Cruciform (Njedebe) Otu obere ụlọ ọrụ na-enweghị uru na-enweghị uru, mmeri nke Ignotus na 2013, na-enye anyị akwụkwọ ntanetị n'efu yana ndị ọzọ nwere obere mbipụta nke, ozugbo ịmechara, bụrụ ngalaba ọha.
Akwụkwọ (Njedebe) Akọwaputara ha dika ọba akwụkwọ dijitalụ na-emekọ ihe ọnụ. Ha raara onwe ha nye na ijikọ ọrụ na ikikere imeghe. Ọ na-ejikọ ọtụtụ ihe na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
nkom (B IN IN) Akwụkwọ ndekọ aha na ebe nkesa omenaala n'efu.
Akwụkwọ 1 € (Njedebe) Naanị oru ngo na ndepụta niile anaghị enye akwụkwọ n'efu, mana ihe kpatara ya bara uru. N’ọnọdụ inye onyinye iji chekwaa ụmụaka, ịnwere ike ibudata akwụkwọ niile ịchọrọ, agbanyeghị na ha na-atụ aro ka ị kwụọ € 1 n’otu akwụkwọ iji nyere ụmụaka aka.
Akwụkwọ dijitalụ (ES / EN / FR) Nchịkọta ọrụ ndị Ignacio Fernández Galván mere.
Dị nke Kindu, olee akwụkwọ ole ị nwere ike imeghe na agụ Amazon?
Saịtị ndị ọzọ ibudata eBooks
N'akụkụ a anyị na-ahụ ihe onwunwe na-enye anyị akwụkwọ ntanetị na isiokwu ụfọdụ.
Museumlọ ihe ngosi nka nke Obodo (EN) Museumlọ ihe ngosi nka nka na New York na-enye anyị ọtụtụ mbipụta n'ụdị PDF nke metụtara gburugburu nka.
Dijitalụ Comic Museum (EN) Nchịkọta nke ndị na-atọ ọchị oge ochie site na oge ọlaedo na ihe karịrị 15.000 ngalaba ngalaba na-atọ ọchị maka nbudata na-akwụghị ụgwọ.
Ọ́bá Akwụkwọ Ntanetị nke Teknụzụ Mmụta (Njedebe) Nke a bụ nchịkọta nke akwụkwọ dijitalụ na akwụkwọ akụkọ na PDF nke Prọfesọ Diego F. Craig mere, na mpaghara nke Teknụzụ Mmụta, na ihe niile bụ akwụkwọ na ngalaba ọha ma ọ bụ ikikere na-enye ha ohere ịkekọrịta.
Boe - Iwu (Njedebe) A na-emelite nchịkọta nke ụkpụrụ ndị bụ isi na usoro iwu mgbe niile yana pfd na epub. Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ na-ewepụta ha.
Ọrụ azụmahịa nwere akwụkwọ ntanetị n'efu
Ọ bụ ihe oru ndi ahia na-enye ufodu akwukwo n'efu. N'ebe a, anyị na-ahụ nnukwu ụlọ ọrụ dịka Amazon, Google ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ, obere ndị na-ebipụta akwụkwọ na-enye akwụkwọ ntanetị n'efu na weebụsaịtị ndị ọzọ na engines ọchụchọ nke dabere na ọrụ dịka Gutenberg.
Amazon unu si n'ihe unu (B IN IN) Nnukwu ebook na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akwụkwọ ntanetị n'efu n'asụsụ niile.
- Ngalaba ọha na eze na Amazon (B IN IN) Chọọ akwụkwọ sitere na Amazon nwere ikikere Ọha na Ọha.
- Sifter Akwụkwọ efu (B IN IN) Nchọgharị ọchụchọ dabere na akwụkwọ Amazon iji mee ka ọ dịrị anyị mfe ịchụ nta maka akwụkwọ ntanetị n'efu maka Kindle anyị, enwere akwụkwọ n'asụsụ Spanish n'agbanyeghị na ihe kacha baa ụba bụ akwụkwọ na Bekee.
- Ọtụtụ narị zeros (Njedebe) Ngwá ọrụ nyocha ọzọ dabere na Amazon. O gosiri anyị akwụkwọ dị n’asụsụ Spanish.
- Nbudata (EN) Ihe oru ngo a dabere n’inye onyinye n’efu site na Amazon, Barnes na Nobles na Kobo ma gosi ha ya n’usoro ịde blọgụ.
Oflọ akwụkwọ (B IN IN) Otu n'ime nnukwu ụlọ ahịa na Spain, akwụkwọ azụmahịa ya buru ibu gụnyere ọrụ efu ma ọ bụ efu.
Akwụkwọ Google (B IN IN) Ọ na - arụ ọrụ dịka ndepụta nke akwụkwọ ebe anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ iji gụọ ntanetị ọ bụ ezie na ọ bụghị ibudata.
play Store (B IN IN) Onlinelọ ahịa dị n'ịntanetị Google, ebe anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ akwụkwọ n'efu iji gụọ site na Smartphone ma ọ bụ Mbadamba ụrọ anyị.
Ngalaba ọha (Njedebe) Arụmarụ yiri ndekọ ebe ha na-ahụ maka ịgbasa na ikpokọta ọrụ abụrụla nke ọha na eze.
ụlọ akwụkwọ (Njedebe) Ebumnuche nke na-enye gị ohere ibudata akwụkwọ ntanetị n'efu ma kwụọ ụgwọ mgbe ị gụchara ihe ị chere na ọ dị mma, ụzọ ọhụụ nke ọrụ ego. Chọrọ ndebanye.
Akwụkwọ Virtual (Njedebe) Portal ebe ndị edemede oge ochie na-arụ ọrụ na ngalaba ọha na-esonyere ndị edemede ọhụrụ na-ebugo ọrụ ha maka nkesa.
Ndị Na-agụ BQ (Njedebe) Nhọrọ nke ochie nke ụlọ ọrụ BQ na-ebu akwụkwọ nke ndị na-agụ ya. Ha hapụrụ anyị faịlụ zip ka anyị budata.
Ọba akwụkwọ (B IN IN) Portal nke na-enye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akwụkwọ ntanetị.
Akwụkwọ nri (Njedebe) Ọbá akwụkwọ electronic nke na-enye anyị nhọrọ nke ọrụ na ngalaba ọha.
Ọtụtụ akwụkwọ (EN) Ihe oru ngo nke na adota na Gutenbeberg na oru Genome enwere akwukwo.
eBooksgo (EN) Akwụkwọ ndekọ aha akwụkwọ Gutenberg.
Akwụkwọ mbara ala(Njedebe) Enyele akwụkwọ ọha na eze.
Mepee Omenala Ebook n'efu (EN) Depụta ihe karịrị akwụkwọ 700 maka ngwa dị iche iche, ndị na-agụ akwụkwọ, iphone, iphdss, smartphones, wdg.
Mbipụta Dyskolo (Njedebe) Nchịkọta akụkọ nke ọrụ niile ọ na-ebipụta dị n'okpuru ikikere Creative Commons
Afọ (Njedebe) Nnukwu ikpo okwu na-ebipụta desktọpụ nwere ọtụtụ akwụkwọ n'efu.
24 Ihe Ngosiputa (Njedebe) Ọ bụ usoro ikpo okwu n'ịntanetị, ọnụ ọgụgụ dị larịị iji gụọ akwụkwọ na ntanetị, mana ọ na-ahapụ anyị mpịakọta dị iche iche iji gụọ ha n'efu.
Kobo (EN) Nnukwu Kobo, nwere akwụkwọ ntanetị n'efu na katalọgụ ya dịka Amazon.
Barnes & Noble (EN / ES) Nke atọ na esemokwu yana Kobo na Amazon, nwere mpịakọta n'efu maka nbudata.
Smashwords (EN / ES) Ndi nkesa akwukwo ndi Indie, nwere otutu akwukwo ederede efu.
Ebook nnukwu ụlọ ahịa (EN) Ebook dijitalụ maka ndị na-ege ntị, iphone, smartphones, tablet, ipads, pc na mac
Egwuregwu (Njedebe) Redị nkwusa nke na-atọ anyị ụtọ site na ụfọdụ ọrụ ya n'efu
Lektu (Njedebe) nnukwu usoro omenala Spanish, ebe anyị nwere ike ịchọta ebook, akwụkwọ ọdịyo na pọdkastị ma a na-akwụ ha ụgwọ, n'efu, na nbudata site na ịkwụ ụgwọ mmekọrịta ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na-amasị gị.
Akwụkwọ (Njedebe) Ihe karịrị akwụkwọ 10.000 dị maka nbudata. Ọ bụ ezie na ọ bụ n'efu, anyị kwesịrị ịdebanye aha na weebụ iji budata ha.
Ndị nrọ (Njedebe) Onye nkwusa a lekwasịrị anya na edemede a na-elekwasị anya azụmaahịa ya na-ere akwụkwọ akwụkwọ mana hapụ anyị ọtụtụ ọrụ n'okpuru ikike Creative Commons ( CC BY-NC , CC BY-NC-SA , CC BY-NC-ND )
Akwụkwọ na ekwentị m (EN) E degharịrị ederede ederede ka enwere ike ịgụ ha na ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla nwere Java
Junkie ebook (EN) Platform maka ndị edemede ọhụrụ na onwe ha
Akwụkwọ Nsọ (EN) Onye nkwusa ozo nke ndi ode akwukwo ndi onwe ha
Saịtị ibudata akwụkwọ ntanetị
Weebụsaịtị pụrụ iche na-enye n'efu na akwụkwọ iwu na akwụkwọ sayensị.
Meghee Libra (B IN IN) Nnukwu ụlọ akwụkwọ dị n'ịntanetị nke akwụkwọ ntanetị. Obi abụọ adịghị ya, ọrụ na-atọ ụtọ nke na-achịkọta ma na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke teknụzụ na akwụkwọ ntanetị n'efu. Jikere ibudata.
Teknụzụ Microsofot (EN) Microsofot na-ahapụrụ anyị ụfọdụ teknụzụ n'efu na sọftụwia efere iji budata na pdf usoro ma ọ bụ gụọ n'ịntanetị.
Akwụkwọ NASA (EN) Akwụkwọ NASA banyere akwụkwọ gbasara ụgbọ elu. Na-akpali nnọọ mmasị.
Akwụkwọ CSIC (Njedebe) A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akwụkwọ ndị na-enweghị ego sitere na Council Council for Scientific Research. O metụtara ngalaba sayensị nile.
Na Tech (EN) Katalọgụ teknụzụ na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ nke na-arụ ọrụ na Open Access.
Akwụkwọ Tech Tech (EN) Free na eze-free injinia na akwụkwọ mmemme.
O'Really OpenBooks (EN) Olọ mbipụta akwụkwọ nke O'Really na-ahapụ anyị Open Books. Enweghị ike ibudata ha mana ị nwere ike ịgụ ntanetị, ụfọdụ akụrụngwa na-atọ ụtọ.
Akwụkwọ mmemme na-akwụghị ụgwọ (EN) O nwere ike ịbụ ndepụta kachasị mma m hụtụrụla, mkpokọta mara mma, nke nwere obi ọjọọ, debekwara site na Github. Na njikọ a njikọ ndị ọzọ nke teknụzụ fọrọ nke nta ka ha kwụsị inwe ezi uche. Na mgbakwunye na Github anyị hụrụ ya reSRC na usoro weebụ enyi na enyi
Akwụkwọ Mmemme Ntanetị (EN) Nchịkọta ọrụ na mmemme, sayensị kọmputa, injinia ngwanrọ, mmepe weebụ, ngwa ngwa, ọdụ data, netwọkụ, wdg.
Ma nke a bụ maka ugbu a 🙂
Ugbu a anyị atụkwasịla ndị nkwusa na-enye akwụkwọ n'efu ma anaghị ekwe ka ehichaa ma ọ bụ chọọ ha n'ụzọ dị mfe, mana anyị na-eche echiche banyere otu esi etinye ha na ndepụta ahụ n'ihi na n'ezie ọtụtụ ndị nwere mmasị.
Ọ bụrụ na ị maara banyere saịtị ndị ọzọ nwere ọdịnaya na iwu na iwu nke anyị na-etinyeghị na ya, biko ka anyi mara anyị ga-agbakwunye ha na ndepụta nke peeji nke iji budata ebook n'efu na ntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » software » eBooks » Ndepụta saịtị iji budata ebook n'efu
Ana m ekele gị nke ukwuu, na ekele na blog, m na-eso gị kwa ụbọchị! Ọmarịcha ọrụ!
Zaghachi Boris Da Silva Pérez
Ekele dịrị gị maka ịgụ anyị 🙂 Ekele
Zaghachi Nacho Morató
Ekele dịrị gị nke ukwuu maka onyinye gị niile nke ozi gbasara ọdịnala daalụ.
Zaghachi NIEVES PEREZ SAN JUAN
Enwetara m ozi ịntanetị ahụ. Biko gwa m kedu ka m ga esi mee nyocha, na nbudata eboks? Daalụ.
Ndewo Enilda, ị natara ozi email nke bụla ọkwa nke ozi nzuzo na nzukọ nke atụmatụ ọhụrụ anyị ka na-akwado ma nke ahụ adịghị njikere. https://www.todoereaders.com/foros/showthread.php?t=794
akwụkwọ akwụkwọ dijo
Nacho, olee otu o si di nma, ka ikenye ndi a saiti.
Enwere m akwụkwọ nbudata akwụkwọ (ikike niile wepụtara), dị umeala n'obi karịa ndị bipụtara, ee. Lee m kesara ya: Epub na PDF n'efu, ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịga leta anyị 🙂
I meela nke ukwuu maka nnukwu mkpokọta a, nke m chere na ọ ga-ewe gị ogologo oge iji kpokọta ma nye iwu.
Ndewo, daalụ maka ekele ahụ, aga m enyocha ọrụ gị ma ọ bụrụ na ọ zutere ọnọdụ na mmelite na-esote nke ndepụta m ga-eme n'ime ụbọchị ole na ole m ga-agbakwunye ya.
Nacho, daalụ nke ukwuu! Olileanya ọ na-ezute ihe ndị a chọrọ.
Eprel 23 bụ ụbọchị pụrụiche pụrụiche na gburugburu ụwa na ncheta nke "Akwụkwọ Ọchịchị International" na "Ikike nke Onye Ọdee akwụkwọ", na njikọ ndị a, m ga-ahapụrụ gị mkpokọta nke 40 ebook ebook 2014:
Na njikọ a ị ga - ahụ mgbe ụfọdụ akwụkwọ ga - abụ n'efu na Amazon.
Ezi ehihie, azụrụla m akwụkwọ bq cervantes e, mana m rịba ama na ọ fọrọ nke nta ka akwụkwọ niile bụrụ nke ọkụ ... Enweghị m ike ibudata ha na bq (gbaghara amaghị m, m dị ọhụrụ na nke a)
Ezi enyi, ọ bụrụ na nke ahụ emee ọtụtụ, ọ na-abụkarị ịkụ akwụkwọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga na ibe a, ị ga-ahụ ọtụtụ usoro na mgbakwunye na ịnwe ihe karịrị puku iri atọ http://www.megaepub.com/
ndewo gịnị mere na ị nwaa nbudata epub n'efu site na ibe a [edezi] ọ nwere akwụkwọ n'ụdị niile!
Zaghachi ọrụ ebube
Ndewo Milagros. Naanị anyị na-ekwu maka saịtị na nbudata iwu.
Kedu ka ị mere? You maara ebe ikpo okwu ọ bụla ebe ị nwere ike bulite epubs, ma gosi ha ka ha bụrụ ebe nchekwa? Na ndị ọzọ okwu, a virtual shelf nke gị onwe gị akwụkwọ na ígwé ojii. Daalụ!!
Ndewo Darío, ugbu a amaghị m nke ọ bụla, ọ bụ ezie na ejiri m n'aka na a ga-enwe ihe ọ bụla. Nhọrọ dị mma bụ ịwụnye ọbá akwụkwọ gị na njikwa Caliber na Dropbox, oyiri, ụgbọala ma ọ bụ ihe yiri ya. Yabụ na ịnwere akwụkwọ gị n'ịntanetị oge niile.
Nacho, daalụ maka azịza ya. Mana ihe m chọrọ abụghị naanị ịchekwa ha na igwe ojii, mana inwe ike ịlele mkpuchi na aha nke onye ọ bụla, nwee ike ịhọrọ ha. Ọ bụrụ na ọ si na mbadamba nkume m banye na igwe ojii, m ga-ahụ naanị aha faịlụ, ọ bụghị mkpuchi. Na budata ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ịchọta ihe, gwa m! Daalụ!
Ndewo, achọrọ m akwụkwọ "Ebe a na-eli ozu Bekee" nke JM Mediola, ị nwere ike ịgwa m otu m ga-esi nweta ya. Daalụ.
Nnọọ. M na-akpọ gị òkù izute Ablik ( http://ablik.com). Enwere ike ibudata ma ọ bụ gụọ akwụkwọ na ihuenyo na ngwaọrụ ọ bụla. Ha bụ akwụkwọ ochie a na-ebipụtaghị akwụkwọ nwebisiinka, ma ọ bụ ọrụ izizi, nke iwu zuru oke. Enwere ike bipụta ya. Echiche kacha mma!
Geez, emeela m agadi na m "na - enweta ahụhụ nke ihe ndị a", site na ịbụ onye ọhụụ, m ji nwayọọ nwayọọ na - (ma ọ bụ dị ka ...) ... "ọkachamara", na ekele gị niile na ọtụtụ isiokwu na «todoreaders.com»! DAALỤ !
Ezigbo mkpokọta Nacho! Ndị ọzọ karịa Amazon na Audible, kedu weebụsaịtị ndị ọzọ ị kwadoro maka ịge ntị na akwụkwọ ọdịyo?
Zaghachi Lucía García
Ezi ehihie, isiokwu na-adọrọ mmasị maka ndị na-agụ agụ.
Maka ndị niile nwere mmasị ịnata $ 0,00 Akwụkwọ mara mma na ịde blọgụ, ịzụ ahịa, azụmahịa n'ịntanetị, mmepe onwe onye, ​​ego na-abaghị uru ma ọ bụ ego onwe onye, ​​enwere m ike inyere gị aka.
Azụla m BQ Cervantes 3 na Madrid. Mana m bi na Argentina ma ahụrụ m onwe m na ihe ijuanya na enweghị m ike ịzụta akwụkwọ site na Storelọ ahịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na mba m n'ihi na usoro NUBICO anaghị anabata, dịka ọmụmaatụ, kaadị akwụmụgwọ Argentina, ihe na-anaghị eme na mba ndị ọzọ n'ụwa nke m na-azụta.
Enwere m ụzọ ọzọ iji zụta ma ọ bụ mefusị ego ahụ?
Azụrụ m BA Cervantes 3 na njem m gara Madrid n'oge na-adịbeghị anya
Ebe ọ bụ na ụlọ ahịa Nubico anaghị anabata kaadị akwụmụgwọ si mba m, enweghị m ike ịzụta akwụkwọ ọ bụla. Ana m ekwu banyere ịzụrụ, ọ bụghị ibudata ebook n'efu.
Nwere ike onye ịgwa m na nke ụlọ ahịa ma ọ bụ soplaya nke ebook m nwere ike ịzụta si Argentina?
Ndewo Goodnight. Nwere ike ịkwado onye na-agụ 10 ″. Enwere m mmasị n'ụdị a ka m gụọ akwụkwọ ọrụaka na pdf usoro.M nwere ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ abụọ (Papyre na Bq Cervantes) mana na ndị a enweghị ụzọ isi gụọ pdfs. Kedu mgbe onye na-agụ 12 ready dị njikere ma dịkwa mfe ịnweta? Echiche kacha mma
Ekwadoro m ka ị lelee ọrụ Ebrolis, ebe nrụọrụ weebụ ya bụ http://www.ebrolis.com
Zaghachi nke Gi
Ndewo, anyị na-enyocha ya ma ọ bụrụ na ọ mezuru ọnọdụ ndị ahụ, anyị ga-agbakwunye ya na mmelite na-esote nke post.
Daalụ nke ukwuu 🙂
Ndewo m chọrọ ịmata banyere «Unbox» ka ozugbo download dijitalụ akwụkwọ metụtara ahụ ike kpọmkwem oncology na dentistry, akwụkwọ ndị na-adịghị na mba m na-ebipụta. Achọrọ m aro site na ibe ahụ n'ọtụtụ ebe na-eduga m na nke a.
Ekwadoro m 2020 a ka ị nwee ike ibudata akwụkwọ na-eme ya site na bookspdfgratismundo.xyz ha nwere emelitere ebook.
Zaghachi Luis Diego
Amazon na-azụrụ gị ochie eReader gị
BookBook, a kemmasi akwụkwọ ekara ikpe n'ihi na anyị iPad Ikuku